बालबालिकाहरूलाई कसरी हुर्काउने ? यस्ता छन् ७ टिप्स - Kendrabindu Nepal Online News
बालबालिकाहरूलाई कसरी हुर्काउने ? यस्ता छन् ७ टिप्स
बालबालिकालाई खुसीसँग हुर्काउन शान्त वातावरण र नियमित अनुशासन आवश्यक पर्छ । धेरैजसो आमाबुबाहरूले कुनै पनि नियम नियमित रूपमा लागू गर्दैनन् र त्यसलाई पालना नगरेमा हुने परिणामको बारेमा बालबालिकाहरूलाई सचेत बनाउँदैनन् । अनि मेरो बच्चाले यसो गरेन, उसो गरेन भनेर गुनासो मात्रै गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या ल्याउँछ ।
बालबालिका हुर्कंदै गएपछि आमाबुबाहरू बालबालिकाको लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेभन्दा पनि साथी बन्न खोज्छन् । यो तरिकाले ठूला बालबालिकालाई काम नगरे पनि साना बालबालिकालाई भने काम गर्छ । चाहे उनीहरू १५ वर्षका होऊन् वा दुई वर्षका होऊन् नियम र संरचनाले सिर्जना गर्ने सीमाले बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउँछ ।
कोही आमाबुबाहरू कोमल हृदयका हुन्छन् । उनीहरू बालबालिका सानो छँदा अनुशासनमा ध्यान दिँदैनन् । पछि बालबालिका ठूलो भएर भनेको नमान्ने भएपछि निराशा व्यक्त गर्छन् । फलतः बालबालिकाहरूलाई कराउन र गाली गर्न सक्छन् यसले उनीहरूलाई नराम्रो महसुस हुन्छ ।
यहाँ बालबालिकालाई अनुशासित रूपमा कसरी हुर्काउने भनेर ७ टिप्स दिइएको छ । माया र स्याहारको साथमा यी कुराहरूमा पनि ध्यान दिन सके बालबालिकालाई चाहेजसरी हुर्काउन सकिन्छ ।
१. आमाबाबु मिलेर बालबालिकाका लागि नियम बनाउने
धेरै जोडीहरूले विवाह गरेपछि बालबालिकालाई कस्तो अनुशासन सिकाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैनन् । आमाबुबामध्ये एक धेरै नै कडा र अर्को नरम हुन्छन् । जब यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ फ्यामिली थेरापी वा म्यारिज काउन्सिलिङ गराउनुपर्छ । बालबालिकालाई अनुशासन सिकाउन आमाबुबाले बालबालिकाको बारेमा कुरा गर्दा एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्न एउटा सम्झौतामा आउनुपर्छ । आमाबुबाहरू जो बालबालिकाको अनुशासनको विषयमा एकै ठाउँमा उभिँदैनन् उनीहरूका बालबालिकाहरूमा बाल्यकाल र किशोर हुँदै जाँदा समस्या देखिनसक्छ ।
२. आफ्ना बालबालिकाको सुताइ, खाना, होमवर्क आदि विषयमा कुराकानी गर्ने
आमाबाबुहरू आफ्नो बालबालिकाको सताइ, खाना, होमवर्क लगायतका कुरामा सम्झौता गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो बालबालिकाको लागि के गर्ने भन्ने सोचेका छन् त्यो प्रस्ट रूपमा र शान्तसँग वर्णन गर्नुपर्छ । नियम नमान्दा आउने परिणामहरूमा आमाबुबाले बालबालिकालाई सम्झाउनु पर्छ । आफ्नो बालबालिकालाई कोसँग उनीहरूले केही कुरामा छुट पाउँछन् भनेर आमाबुबाको बीचमा तुलना गर्ने मौका दिन हुँदैन ।
३. केही कुरा अह्राउँदा आवाज ठूलो नबनाईकन विस्तारै भन्ने
केही काम अह्राउनुपर्दा बालबालिकाले नमानेमा तीनसम्म गनेर त्यति समयभित्र गर्न भन्नु पनि एउटा राम्रो तरिका हो । बालबालिकाले तीनसम्म गन्ने कुरालाई परीक्षण गर्छन् त्यस्तो बेलामा तपाईले समयसीमा कटेमा पनि अडिग भएर थप काम दिनुभयो भने उनीहरूले मान्न थाल्छन् । यसले समस्या आउन दिँदैन र बालबालिकाले आमाबुबाले भनेको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्छन् ।
४. राम्रो व्यवहारको लागि उमेर सुहाउँदा पुरस्कारहरू दिने
बालबालिकाले आफ्ना खेलौनाहरू सफा गर्छन् वा कुनै कामहरू तपाईले नसम्झाईकन गर्छन् भने त्यस्तो बेलामा उनीहरूलाई केही पुरस्कार दिन सकिन्छ । यसले उनीहरूमा आफ्नो काम आफंैले गर्न हौसला दिन्छ ।
५. कहिलेकाहीँ नियममा अपवाद
उनीहरू सुत्ने समय १० बजे हुन सक्छ तर जब तपाईको बालबालिकाको बेस्टफ्रेन्डको जन्मदिनको पार्टी छ भने तपाईले उसको समयसीमा बढाइदिन सक्नुहुन्छ । तर, बालबालिकालाई आज एक दिनको लागि मात्रै छुट दिएको हो भनेर भन्नुपर्छ र यो सधैंको लागि होइन भन्नुपर्छ ।
६. बालबालिकाले गल्ती गरेमा सजायस्वरूप केही काम गर्न लगाउने
बालबालिकाले केही नराम्रो व्यवहार गरेको खण्डमा सजायस्वरूप घरमा सघाउने खालका काम दिन सकिन्छ । बालबालिकाहरूले कुनै नियम तोडे भने सजायको आशा गरेका हुन्छन् । जब कि किशोरकिशोरीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न खोज्दैनन् । उनीहरूलाई निराश नबनाउनुहोस् । केही काम बिगारेबापत घरको केही सहयोगी काम लगाइदिँदा उनीहरू खुसी हुन्छन् ।
७. आफूले लागू गर्न नसक्ने कुनै पनि कुराको चेतावनी नदिने
जब आमाबुबाले रिसको झोँकमा आफ्ना बालबालिकालाई विभिन्न चेतावनीहरू दिन्छन् त्यसले झनै समस्या निम्त्याउँछ । अझै लागू नै गर्न नसकिने खालको अव्यावहारिक चेतावनी दिएमा उनीहरू झन् अटेरी हुन्छन् । तसर्थ अभिभावकले बालबालिकाका अगाडि बोल्नुअघि निकै विचार पु¥याउनुपर्छ ।